ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 .2mins read
ကိုယ်ဝန်မြန်မြန်ရနိုင် ပါ့မလား၊ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လေးကလည်း ကျန်းမာပါ့မလားဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ့် မေမေသာမက အမျိုးသားပါ လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။
Uncategorized ဇန်နဝါရီ 18, 2021 .2mins read
မာလာရှမ်းကော ကို ပူလိုက်တာ စပ်လိုက်တာဆိုတဲ့ စကားတွေနောက်မှာ လျှာကိုတဟူးဟူး မှုတ်ရင်း မကုန်မချင်းစားမိသွားတတ်ကြတာ လူတိုင်းနီးပါးပါ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ ဇန်နဝါရီ 6, 2021 .2mins read
နောက်ကျမှ ညစာစားခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်စေသလဲဆိုတာ သိပြီးရဲ့လား။ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဆောင်းပါးလေးကို အတူတူဖတ်ရအောင်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း ဒီဇင်ဘာ 31, 2020 .2mins read